Booliska St. Louis: Yay, Xagee, Goorma La Wacayaa • DutchtownSTL.org • Dutchtown, St. Louis, MO
Booliska Dutchtown: Kumaa, Xagee, iyo Goorta La Wacayo
Haddii aad la kulanto su'aal, shaki, ama fal dambiyeed ka dhaca xaafaddaada, yaad u wacdaa? Xaaladaha badankood, waxaad u badan tahay inaad u wacdo booliska. Hoos, waxaan ka wada hadli doonaa qaababka loola xiriiro Waaxda Booliska ee 'St. Louis Metropolitan', iyo sidoo kale sahamiyaan waxyaabo kale oo lagu heli karo duruufaha qaarkood.
Markaad wacdid booliska, ha ahaato khadka 911 ama khadka aan degdegga ahayn, iskuday inaad heshid macluumaad badan intii suurtagal ah. Qodobbada muhiimka ah ee ay tahay in la xuso waxaa ka mid ah goobta, sharaxaadda tuhmanayaasha ama gawaarida laga shakisan yahay (markay khuseyso), iyo wixii faahfaahin ah ee kale ee laga yaabo inay bixiyaan aragti dheeri ah.
Ku dadaal sida ugu fiican ee aad ku bixin karto cinwaanka dhabta ah ee dembiga, ama ugu yaraan sida ugu wanaagsan ee aad kari karto - ha isticmaalin cinwaankaaga. Sida ku xusan our NIS Guide Resource, Wicitaano fara badan oo loogu talagalay adeegga waxay sare u qaadi karaan cinwaanka xaaladda hantida dhib, taasoo keeneysa baaritaan dheeri ah oo ay sameeyaan booliska iyo waaxaha kale ee magaalada.
Takhaatiiryaashu waxay ku weydiin doonaan inaad jeclaan lahayd inaad ka tagto magacaaga iyo lambarka taleefanka soo-wicidda. Tan looma baahna. Waad sameyn kartaa warbixinno adiga oo aan magac lahayn. Si kastaba ha noqotee, haddii aad ka tagto macluumaadkaaga xiriirka, saraakiisha ayaa la soo xiriiri kara si ay u helaan macluumaad dheeraad ah.
Inteena ugu badan waan garaneynaa inaan wacno 911 xaaladaha naf-gooyada ah. Haddii aad u baahan tahay boolis deg deg ah, dab damis, ama adeeg caafimaad, wac 911. Haddii aadan hubin in xaaladaadu tahay mid deg deg ah iyo inkale, wac 911. Markii aad shaki gasho, wac 911.
Waa inaad markasta wacdaa 911 haddii uu jiro dab ama xaalad caafimaad oo degdeg ah. Wac 911 dembiyada rabshadaha wata ama dambiyada socda, oo ku dadaal inaad ku bixiso sharraxaadda tuhmanayaal kasta ama baabuur ku lug leh.
Haddii aad ku lug leedahay ama aad aragto shil sababi kara dhaawacyo, wac 911. Sidoo kale waa inaad wacdaa 911 haddii shilku hor istaagayo taraafikada ama u keenayo khatar kale kuwa ku dhow.
Khadka Aan Degdegga Ahayn ee Booliska
Xaaladda degdegga ah, si kastaba ha noqotee, waxaa jira lambar taleefan oo aan degdeg ahayn oo la waco: (314) 231-1212. Wac khadka aan degdegga ahayn haddii aad qabtid arrin aan u baahnayn jawaab degdeg ah.
Dembiyada hantida qaarkood ayaa dammaanad ka qaadaya wicitaan khadka aan degdegga ahayn. Tusaale ahaan, haddii qof habeen ka xado hantida gaarigaaga ama garaashkaaga, wac khadka aan degdegga ahayn. Haddii uusan jirin qof laga shakisan yahay oo dambiga laga yaabo inuu dhacay waqti hore, wac nambarka aan degdegga ahayn.
Inbadan oo kiisaskan ka mid ah, booliisku ma imaan doono dhab ahaan goobta uu fal dambiyeedku ka dhacay - iyaga ayaa qaadan doona macluumaadka kuna soo wargalin doona taleefanka.
In kasta oo dambi la galay, booliisku awood uma yeelan doono isla markiiba wax badan haddii uusan tuhmanaha weli ka ag dhawayn. Waxay ururin karaan macluumaad gacan ka gaysan kara isku xidhka silsilado dhacdooyin ah muddo. Waxay sidoo kale diyaarin karaan warbixin gacan ka geysaneysa in si sax ah loola socdo tirakoobka dambiyada. Caymiskaagu wuxuu kaloo codsan karaa nuqul warbixinta ah.
Tusaale kale oo ah in la waco khadka aan deg-degga ahayn waxay noqon kartaa dambiil fender ama shil kale oo yar oo aan lahayn dhinacyo dhaawac ah iyo xannibaadda taraafikada Booliisku waxay qaadan doonaan warbixin aad u adeegsan karto inaad ku xareyso sheegashadaada caymiska.
Waxaan si adag kugula talineynaa inaad codsato oo aad hayso lambarrada warbixinnada ee nuucaan oo kale ah maadaama ay hadhow faa'iido u yeelan karaan la-socoshada booliiska ama la macaamilka caymisyada.
Ku wargalinta rasaasta Booliska
Waad soo wici kartaa 911 ama khadka aan deg-degga ahayn si aad uga warbixiso dhawaqa rasaasta. Haddii aad maqasho dhawaqa rasaasta, iskuday inaad fiiriso ugu yaraan laba shay: halka aad rumeysan tahay in rasaasta lagu furay, iyo inta xabbadood ee aad maqashay. Macluumaad kasta oo dheeraad ah oo aad bixin karto ayaa waliba caawin doona.
Xeerka Suulka DutchtownSTL ee Wicitaanka Qoryaha
Haddii aad si hubaal ah u ogtahay halka rasaasta lagu furay, wac 911. Bixi bar bilaash ah oo bilaysku bilaabayo baadhitaankooda.
Haddii aadan hayn macluumaad badan oo aan ka ahayn “rasaas ayaa la riday,” wali waa muhiim inaad soo sheegto dhacdada, in kastoo aad dooran karto inaad ku samayso khadka aan degdegga ahayn. Wicitaano badan oo isla aagaga guud ah ayaa kaa caawin kara tilmaamidda meel gaar ah oo gaar ah.
Kheyraadka booliska ayaa loo qoondeyn karaa iyadoo lagu saleynayo wicitaanada adeegga. Marka xitaa haddii aad gaaban tahay faahfaahinta, hubi in wicitaankaaga iyo dhacdadu ay qorteen. Had iyo jeer waa muhiim inaad wacdo.
Markaad dhawaaqeyso dhawaaqa rasaasta, ku dadaal sida ugu fiican ee aad ugu qiyaasto halka rasaasta lagu ridayay. Haddii aad rumeysan tahay inay ahaayeen xayndaabka ku xiga, sheeg magaca waddada iyo nambarka lambarka. Tallaalada ka fog fog, sheeg qiyaastaada ugu fiican. Marka muwaadiniin badan ay soo sheegaan rasaas ka socota isla aagga isla waqtigaas, booliisku wuu yareyn karaa aagga si loo baaro
Soo diraha 911 wuxuu kaloo ku weydiin doonaa imisa xabbo oo aad maqashay. Xusuustaada ugufiican, sheeg inta ama qiyaastii inta xabbo ee aad maqashay. Muuji haddii si deg deg ah shaqada looga eryay iyo in kale - haddii aad xusuusan karto qaab (pop-pop… pop-pop-pop-pop), u sheeg dirayaha. Haddii rasaastu u dhawaaqday si kala duwan, sidii iyadoo laga yaabo inay ka kala yimaadeen laba ama in ka badan oo qoryo kala duwan ah, ka warbixi sidoo kale.
Tilmaamaha Warbixinta ama Waxqabadka socda
SLMPD waxay leedahay laba qodob oo dheeri ah oo lala xiriiro si loo soo gudbiyo arimaha ama macluumaadka laga yaabo inaysan u kicin heerka wicitaanka 911 ama khadka aan deg degga ahayn.
Si aad u hesho talo ama macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan dembi dhacay, wac Dembiilayaasha Gobolka St. Louis at (866) 371-TALO (8477). Sidoo kale waad sameyn kartaa ku soo gudbi talobixin adigoo adeegsanaya websaydhka Crimestoppers. Xaaladaha qaarkood ee caaradu keento dambi culus, abaalmarin ayaa la siin karaa.
Waxa kale oo aad ku soo wargelin kartaa khadka tooska ah ee markhaatiga qarsoon ee SLMPD adoo wacaya (314) 241-gaysteen (2677). Ka tag sharaxaad faahfaahsan oo xaalada ah oo ay ku jiraan goobta, magacyada laga shakisan yahay ama sharaxaada, iyo nooca waxqabadyada.
Intaa waxaa sii dheer, kanaga Khabiirka Horumarinta Xaafadaha waxaa loo tababaray in ay soo faragaliso howlaha rabshadaha socda ee la xiriira meel ama hanti gaar ah. The NIS waxay la shaqeyn doonaan Qeybta Dhibaatooyinka Dhibaatooyinka iyo booliska kale si ay u raacaan ikhtiyaarrada gudaha iyo ka maqnaanshaha nidaamka cadaaladda dembiyada.
Ma hubo? Wac 911
Haddii aadan hubin in xaaladdu u baahan tahay wicitaan 911 iyo in kale, dooro 911. Wicitaannada 911 iyo khadka aan degdegga ahayn dhammaantood waxay aadaan isla xaruntii dirista, laakiin wicitaannada aan degdegga ahayn waxaa lagu calaamadeeyay inay yihiin kuwo aan degdeg deg deg u ahayn. Markaad shaki gasho, wac 911.
Degmooyinka Booliska ee Dutchtown
Aagga weyn ee Dutchtown wuxuu ku dhex yaal laba meelood oo kala duwan SLMPD degmooyinka booliska, degmadii koowaad iyo degmadii saddexaad.
SLMPD Degmadii Kowaad
The Degmadii Koowaad ee SLMPD wuxuu daboolayaa qaybaha koonfurta iyo galbeedka ee Dutchtown iyo gebi ahaanba Mount Pleasant. Soohdimaha Degmada Koowaad waxay ka bilaabmayaan xadka magaalada dhinaca koonfureed, ilaa Meramec Street, South Grand Boulevard, iyo Chippewa Street ilaa woqooyi.
Waaxda Koowaad ee Waaxda Booliska ee 'St. Louis Metropolitan'.
Degmada Koowaad waxay u fidsan tahay koonfurta iyo galbeedka si loogu daro xaafado kale sida Holly Hills, Boulevard Heights, Princeton Heights, iyo Southampton.
La Xiriirka Degmadii Koowaad
Degmada Koowaad waxay ka mid tahay SLMPD Qaybta ilaalada Koonfurta oo fadhigeedu yahay xaafadda Southwest Garden. Kala xiriir saldhiga ilaalada koonfurta (314) 444-0100.
Sarkaalka Xiriirka Xaafada Dutchtown ee Degmada Koowaad waa Ofc. Steve Burle. Waxaad ugu soo diri kartaa emayl smburle@slmpd.org.
Capt. Donnell Moore waa Taliyaha Degmada Kowaad. Waad la xiriiri kartaa adoo wacaya saldhiga ilaalada Koonfurta ama emayl dmoore@slmpd.org.
Maj. Ryan Cousins ​​waa Taliyaha Qaybta Ilaalada Koonfurta. Waxaad kaheli kartaa South Patrol adoo wacaya (314) 444-0100 ama emayl rocousins@slmpd.org.
SLMPD Degmadda Saddexaad
The Degmooyinka Saddexaad ee SLMPD wuxuu daboolayaa qaybta woqooyi ee Dutchtown habboon, iyo sidoo kale Gravois Park iyo Marine Villa. Degmadda Saddexaad waxay ka kooban tahay wax kasta oo woqooyi ka xiga Meramec Street iyo bariga Grand.
Waaxda Saddexaad ee Waaxda Booliska ee 'St. Louis Metropolitan'.
Degmada Saddexaad waxay u fidsan tahay dhammaan woqooyiga ilaa Chouteau Avenue oo koonfurta ka xigta Downtown, waxayna daboolaysaa xaafado kale oo ay ka mid yihiin Lafayette Square, Soulard, iyo Benton Park.
La Xiriirka Degmadda Saddexaad
Degmada Saddexaad waa qeyb ka mid ah Qeybta Ilaalada Bartamaha, oo ku taal waqooyiga Magaalada hoose ee xaafadda JeffVanderLou. Lambarka taleefanka ugu weyn ee Central Patrol waa (314) 444-2500.
Ofc. Jazmon Garrett waa Sarkaalka Xiriirka Xaafadaha ee qeybta Saddexaad ee xaafada Dutchtown. Waxaad kala xiriiri kartaa iyada (314) 444-2595 or jdgarrett@slmpd.org.
Capt. Joe Morici waa Taliyaha Qaybta Saddexaad. La xiriir isaga oo wacaya Central Patrol ama at (314) 444-2597. Waxa kale oo aad emayl ugu diri kartaa adiga jamorici@slmpd.org.
Maj. Renee Kriesmann waa Taliyaha Qaybta Ilaalada Dhexe. Waxaad kala xiriiri kartaa iyada oo loo yaqaan Central Patrol adigoo soo wacaya (314) 444-2500.
La Xiriirida Adeegyada Kale ee Aan Degdegga Aheyn
Xaaladaha qaarkood markasta uma baahna jawaab booliis. Mar labaad, markaad shaki gasho, wac 911 ama khadka aan degdegga ahayn. Laakiin maskaxda ku hay in booliisku aanu ahayn shaqaale bulsheed, khubaro caafimaad, ama la taliyeyaal.
DutchtownSTL.org ayaa soo ururiyey a liiska ilaha kale si wax looga qabto arrimaha xasaasiga ah sida welwelka caafimaadka maskaxda, guri la’aanta, rabshadaha guriga ka socda, ku xadgudubka mukhaadaraadka, iyo waxyaabo kale oo badan. Khubarada loo tababaray inay la shaqeeyaan dhibaatooyinka gaarka ah waxay badanaa bixin karaan jawaabo wax ku ool ah oo ciqaab yar. Mar labaad, haddii ay jirto khatar degdeg ah, wac 911, laakiin xalka muddada-dheer, tixgeli inaad la xiriirto bixiyeyaasha kale ee adeegga.
Loogu talagalay arrimo badan oo dhibaato ka kooban laakiin aan khatar degdeg ah soo bandhigin Xafiiska Adeegga Muwaadiniinta ama adiga Khabiirka Horumarinta Xaafadaha ku siin kara hagitaan iyo caawimaad. Warbixin ku xaree CSB ama wac taada NIS waxqabadka buuqa socda oo ay kujirto xadgudubyada koodhka, dhibaatooyinka dhismayaasha banaan, arrimaha dayactirka, iyo inbadan. CSB ama NIS-kaaga ayaa la shaqeyn doona ama u gudbin doona kiisaska SLMPD sida loogu baahdo.
Sawirrada maqaalkani waxay ku mahadsan yihiin sawir qaade Paul Sableman.
La wadaag boggan Facebook, Twitter, ama maraya Email. Boggan waxaa markii ugu dambeysay la cusbooneysiiyay January 17th, 2021 .
DutchtownSTL.org Kheyraadka Xaafada Dutchtown Booliska Dutchtown: Kumaa, Xagee, iyo Goorta La Wacayo